वित्तीय सहयोग गर्न महाथिरको चीनसँग आग्रह
बेइजिङ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले आर्थिक समस्याबाट जुधिरहेको मलेसियालाई सहयोग गर्न चीनको उच्च नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् । मलेसियाको पूर्व सरकारले सम्झौता गरेका कतिपय चिनीया सहयोगका ठूला परियोजनामा परिमार्जन गर्न पनि उनले अनुरोध गरे ।
चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका ९३ वर्षीय प्रधानमन्त्री महाथिरले पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकले चिनीया राज्य–प्रवर्धित परियोजना स्वीकृत गर्दा ठूलो आर्थिक हिनामिना गरेको र मलेसियाको आर्थिक परिस्थितिलाई दाउमा राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
महाथिरको सरकारले चिनीया सहयोगमा सञ्चालित २२ अर्ब डलरभन्दा बढीका परियोजना निलम्बित गरेका छन् जसमा एउटा प्रमुख रेलसेवाको निर्माण समेत रहेको छ । महाथिरले आफ्नो पाँच दिने चीन भ्रमणका क्रममा उनकै शब्दमा “अन्यायपूर्ण” सम्झौताहरुका विषयमा चीनसमक्ष औपचारिक कुरा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
महाथिरले २५० अर्ब डलर पुगेको मलेसियाको राष्ट्रिय ऋण कटौती गर्न खोजिरहेका छन् ।
उनले चीन भ्रमणका क्रममा विशाल ई–कमर्स कम्पनी अलीबाबाका संस्थापक ज्याक माँसँग भेट गरेका छन् । उनी चिनीया सवारी साधन निर्माता कम्पनी गिली र मलेसियाली कार निर्माता प्रोटोनबीचको सहयोग सम्झौता कार्यक्रममा सहभागी भए । मलेसियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन नै हो, र मलेसियाको ठूलो जनसंख्या चिनीया मूलको छ ।
द्विपक्षीय सम्बन्ध विगतको सरकारसँग ज्यादै न्यानो थियो, र प्रमुख पूर्वाधार र निर्माण परियोजनामा चीनसँग हस्ताक्षर भएसँगै चिनीया लगानी पनि बढेको थियो । तर आलोचकहरुले यस्तो लगानीमा पारदर्शिता र शर्तहरुका बारेमा प्रस्ट नभएको बताउँदै आएका छन् जस्तै, ऋणको ब्याजदर ।
बेइजिङ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले आर्थिक समस्याबाट जुधिरहेको मलेसियालाई सहयोग गर्न चीनको उच्च नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् । मलेसियाको पूर्व सरकारले सम्झौता गरेका कतिपय चिनीया सहयोगका ठूला परियोजनामा परिमार्जन
पुत्रजया, मलेसिया। मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले चिनीयाको सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको अर्बौं डलरको पूर्वाधार परियोजना रद्द गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन् । अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता रद्द गरी मुलुकलाई
९२ वर्षमा प्रधानमन्त्री ! विश्वलाई चकित पार्ने महमद महाथिर को हुन् ?
काठमाडौं । मलेसियाका चर्चित नेता महाथिर महम्मदले ९२ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेर गत बिहीबार विश्व रेकर्ड बनाएका छन् । भर्खरै सम्पन्न चुनावमा उनको गठबन्धनले २ सय २२ मध्ये १ सय
मलेसियाको सत्तामा महाथिर मोहमदको शानदार पुनरागमन, संसारकै वृद्ध कार्यकारी प्रमुख
क्वालालम्पुर । मलेसियाको संसदीय निर्वाचनमा यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदको विपक्षी गठबन्धनले सानदार जित हात पारेको समाचार छ । उनको चुनावी गठबन्धनले सन् १९५७ देखि निरन्तर रुपमा मलेसियामा सत्तामा रहेको एक